Mfm : « Ny Pr Zafy Albert no hany nanaja ny demôkrasia teto »
Iray tamin’ireo solontenan’ny ankolafin-kery nasaina nanohina ny fanamarihana ny faha-30 taonan’ny Arema tetsy amin’ny Hôtely Panorama omaly ny antoko Mfm. Ingahy Rakotovazaha Olivier no nisolotena ity antoko iray ity, ary nandray fitenenana izy omaly. Nivoitra tamin’ny teny nataony ny filazana fa “tsy mpanohitra ny fitondrana ankehitriny akory ny Mfm saingy tsy mijery arina an-tava”. Nomarihiny koa fa “fanomezan-danja ny fanoherana no nahatongavanay eto satria ny demôkrasia dia mitaky fisian’ny mpanohitra”.
Nitodihan’i Olivier Rakotovazaha koa omaly fa “raha 30 taona ny Arema dia saika teo amin’ny fitondrana ny ampahany betsaka tamin’izany fotoana lavabe izany”. Tsy mifanalavitra amin’izany koa anefa ny antoko Mfm, hoy ihany ity ministry ny fitaterana teo aloha ity, fa raha 34 taona ny Mfm ankehitriny dia saika tany amin’ny toeran’ny mpanohitra hatrany tamin’ny ankapobeny.
Misy lesona tokony hotsoahina amin’izany raha mifanome voninahitra toa izao ny Mfm sy ny Arema ankehitriny, hoy ihany izy, satria izay no tokony ho toe-tsaina anaovana politika amin’izao fotoana.
Nomarihiny manokana fa ny fanajana ny demôkrasia no vato fehizoron’ny fanaovana pôlitika maoderina amin’izao taon-jato iainantsika ankehitriny izao. Tsy nihambahamba mihitsy ity solontenan’ny Mfm ity, fa nataony volan’imaso tsy mba kilema ny raharaha. Aoka hotsorina, hoy izy, fa tamin’ny andro nitondran’ny Pr Zafy Albert no azo ambara ho voahaja izay demôkrasia izay teto, satria afaka naneho ankalalahana ny heviny ny mpanohitra fa tsy mba nandefasana Tts toy ny tamin’ny Repoblika faharoa na mpikarama an’ady toy ny tamin’ny 17 desambra teo. Ny haino aman-jerim-panjakana (Tvm-Rnm) dia azo nanehoan-kevitra ara-dalàna tsy nisy sakantsakana, fa na Ingahy Ratsiraka avy any ivelany aza dia afaka niteny mivantana tao, hoy ihany Ingahy Rakotovazaha.
Ny afitsoky ny fitondrana ankehitriny indray koa anefa, hoy ihany izy, dia manoatra noho ny nataonareo Arema fony ianareo teo amin’ny fitondrana no ataony raha resaka demôkrasia no asian-teny.
Ny tena faniriana, hoy izy, dia ny hisian’ny fifandimbiasan-toerana tsy misy fifandonana na gidragidra in-tsony, ary izay no anamafisanay Mfm fa ilaina sy takiana ny fanaovana famotsoran-keloka.
Momba ny fitakian’ny Arema ny fananganana rafitra tetezamita dia nosoritan-dRakotovazaha Olivier fa “manana olona ao anatin’ny andrim-panjakana ny Arema, ankoatran’ireo Arema niova ho Tim any anaty rafitra isan-karazany any, ka heverina fa mba hiainga avy ao amin’ny Antenimierandoholona izay ahitana Arema maro an’isa ny hevitra ho fanatanterahana an’izany tetezamita izany”.